बाउवासंघको सदस्यमा निर्वाचित, युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष कंडेललाई बधाई तथा सम्मान ! – ebaglung.com
बाउवासंघको सदस्यमा निर्वाचित, युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष कंडेललाई बधाई तथा सम्मान !
२०७५ पुष २, सोमबार २०:०४	Top News, थप समाचार
बागलुङ २०७५ पुस २ । नेपाल प्रेस युनियन बागलुङका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सल्लाहकार नरेश कंडेललाई प्रेस युनियन बागलुङलले बधाई तथा सम्मान गरेको छ ।
हालै सम्पन्न बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको ५५ औं साधारण सभा तथा १७ औं महाधिवेशनबाट खुल्ला सदस्य पदमा निर्वाचित कंडेललाई युनियनले बधाई तथा सम्मान व्यक्त गरेको हो । आफ्नो नियमित वैठकको अवसरमा कंडेललाई बधाई तथा सम्मान गरिएको प्रेस युनियन बागलुङका अध्यक्ष प्रदिप पन्तले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य एवं धौलागिरी संयोजक ज्ञानेन्द्र गौतमले पत्रकारितामा सक्रिय कंडेल एक सफल व्यवसायीको रुपमा नेतृत्व तहसम्म पुगेकोमा युनियन र सिंगो पत्रकार जगतलाई समेत फाईदा भएको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि मात्र नभई पत्रकार र संचार माध्यमको हितका लागि कंडेललाई काम गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बागलुङ सूचना तथा संचार सहकारीका संचालक समितिका सदस्य चण्डी प्रसाद शर्मा, युनियनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले कंडेललाई बधाई व्यक्त गरेका थिए । कंडेल नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका उपाध्यक्ष समेत हुन । बैठकको अध्यक्षता युनियनका अध्यक्ष प्रदिप पन्त र संचालन सचिव नारायण रिजालले गरेका थिए ।
तित्याङ शिवालय मन्दिरकी पुजारी सीता कुँवरको डिलबाट लडेर मृत्यु !